ᐈ Buddy De System Pokémon GO: Ihe niile I Kwesịrị Knowmara ❤️ GOLUEGO.COM
On Ọnwa Mbụ 7, 2021
Usoro Buddy nke Pokémon GO Emeziwo ya, ma otutu, ọ bụ ya mere anyị ji ewetara gị atụmatụ ọhụrụ nke usoro ihe a nke obodo hụrụ n'anya nke ukwuu.
Cheta na ọrụ a na-enye ndị na-azụ ọzụzụ aka ịbụ ezigbo ndị enyi nke Pokémon ha. Na nke a, anyị nwere ike irite ego pụrụ iche dịka onye anyị na Pokémon na-arị elu.
Na iji nweta ego ọ bụla, anyị ga-eme ka enyi anyị pokémon. Anyị ga-ebido na "Ezi Enyi" ma kwụsị na "Ezigbo Enyi". Iji dozie ya, anyị ga-anakọta otu ọnụọgụ ịhụnanya.
Etu esi achikota obi na Buddy system Pokémon GO?
Nkuzi niile nwere ike ichikota obi n’uzo ndi a:
Ije ije ọnụ anyị ga-enweta anọ obi. Maka kilomita abụọ ọ bụla anyị ga-enweta obi. Ọ bụrụ na anyị dochie enyi anyị, anyị ga-eweghachi ọganihu niile emere na obi na-esote. N'ezie, a gaghị eweghachi ihe ụtọ.
Nye mmuta nye enyi anyi anyi ga enweta ruru obi anọ. Iji nweta obi ndị ọzọ, Pokémon ga-adị na efu. Iri mkpụrụ osisi atọ dị ka otu obi, yabụ anyị ga-achọ mkpụrụ iri na abụọ kwa ụbọchị iji nweta obi anọ. Igwuri egwu na-enye obi abuo ka emetu enyi ahu aka na onodu AR. Anyị ga-emetụ ha aka maka sekọnd ole na ole ruo mgbe ha tụgharịrị ma jiri obi ụtọ na-awụlikwa elu.
Na-alụ ọgụ ọnụ na-enye obi abụọ ịlụ ọgụ na mgbatị ahụ, mwakpo, Team GO, Rocket ma ọ bụ ọgụ ọzụzụ. Nkuzi ndi ndu dikwa mkpa dika oganihu.
Inweta foto anyị ga-enweta obi abụọ.
Ga leta ọhụrụ ebe da obi abụọ, yabụ anyị na onye anyị na ya ga-aga ebe ọhụrụ iji nweta ihe ndị a.
Ozi ndi ozo banyere usoro Buddy si Pokémon GO
Anyị nwere ike irite ihe ruru 10 obi kwa ụbọchị iji bulie ogo ọbụbụenyi.
Ọzọkwa, ọ bụrụ na enyi anyị nwere "obi ụtọ", anyị ga-enwe ohere nke imeri ọbụna mkpụrụ obi 20.
Iji mee ka ịnụ ọkụ n'obi nke enyi anyị dịkwuo elu, anyị nwere ike ịzụ mkpụrụ osisi pokémon anyị iji mejupụta mita agụụ.
Anyị nwere ike ịnweta ihe 32 iji kpalie onye anyị na ya Pokémon Go. Ozugbo anyị ruru ogo kachasị, anyị nwere ike ibuli ọkwa enyi iji nweta ọtụtụ obi dị ka o kwere mee.
Complete ndepụta nke 17 ọhụrụ skins na Wild Rift!
free fire mkpọ.com